နိုင်ငံ​ငယ်​လေး​တစ်​ခု​ဖြစ်လာ​တဲ့ Apple | J-Myanmar
Apple ဖြစ်​ရ​တာ ဂုဏ်​ယူ​လိုက်​စမ်း​ပါ။ အခြေအနေ အရမ်း​ကောင်း​တာ​ပဲ။ ယခု​သီတင်း​ပတ်​ရဲ့ အချက်အလက်​တွေ​အရ ဒေါ်လာ ဘီ​လျံ ( ၇​ဝ​ဝ ) ကြွယ်​ဝ​တဲ့​အထိ​ကို ကောင်း​နေ​တာ​ပါ။ အင်္ဂါနေ့ ( Feb 9th, 2014 ) ဈေး​ကွက်​ပိတ်​သိမ်း​ချိန် နောက်ဆုံး​ဈေး​ဖြစ်​တဲ့ ပန်း​သီး​ရှယ်​ယာ – AAPL ( Apple Inc. ) တစ်​ခု​ရဲ့​တန်ဖိုး ( ၁​၂​၂.ဝ​၂ ) ဒေါ်​လာ​ဆို​တဲ့​ပေါက်​ဈေး​ဟာ အမေ​ရိ​ကန်​ကုမ္ပဏီ​တစ်​ခု ဒီ​လောက်​အမြန်​နှုန်း​ကို လီ​ဗာ​မ​နင်း​ပဲ တက်​သွား​တဲ့ ဈေး​မျိုး​ပါ။
အခု​ကြည့်​ဦး .. ဆွစ်​ဇာ​လန်​မှာ အာမခံ​စာချုပ် – Bond တွေ ရောင်း​နေ​ပြန်​ပြီ။ ဒီ​နည်း​လမ်း​က သူ့​လက်​ထဲ​ကို ဈေး​ကွက်​စိတ်ဝင်စား​သူ​တွေ​ရဲ့​ငွေ​တွေ အိတ်​သွန်​ဖာ​မှောက် အရောက်​သိမ်း​တဲ့ အရောင်း​နည်း​ပညာ​လို့ ဆို​နိုင်​ပါ​တယ်။ အခု​လို ပြည်​ပ​က ဝင်​ရောက်လာ​မယ့် ရင်းနှီး​ငွေ​ကို လှည့်ပတ်​သုံး​ခြင်း​အား​ဖြင့် သူ​တို့ အကြွေးရောင်း​ထား​တဲ့​ငွေ​တွေ​အပေါ် အမေ​ရိ​ကန်​အစိုးရ​ကို အခွန်​မ​ဆောင်​ရ​ပဲ ငွေ​ပြန်ဖော်​နိုင်​မှာ​ဖြစ်​လို့ ပန်း​သီး​ဟာ တော်တော်​ဥာဏ်​ပါး​တဲ့ ဈေးသည်​ကြီး​ဆို​တာ မ​မေ့​လိုက်​ကြ​ပါ​နဲ့။
ဒီ​လောက်​နဲ့​တင် ရပ်​မ​သွား​သေး​ပါ​ဘူး။ အရံ​ငွေ​ထူထောင်​ဖို့ အာမခံ​စာချုပ်​တွေ​ရောင်း​တဲ့​အပေါ် ပေး​ရ​တဲ့ အပြည်​ပြည်​ဆိုင်​ရာ​ငွေ​တိုး​နှုန်း​က ပါး⁠ပါး​လေး​မို့ ပင်လယ်​ရပ်​ခြား​ငွေ​ထုတ်​ကြီး​ကို ပွေ့ပိုက်​ပြည်တော်​ခွင့်​ရ​တာ ပန်း​သီး​ရဲ့ စီးပွား​ရေး​နဲ့​မူ​ဝါဒ ကျွမ်းကျင်​မှု​ဆို​တာ မြင်သာ​ပါ​တယ်။ အထုတ်​ကို ဖြေ​ပြ​လိုက်​ရင် ဒေါ်လာ ( ၁​၇​၈ ) ဘီ​လျံ ရှိ​တယ်​ဆို​ရင် အံ့ဩ​သွား​မှာ​လား? ဒီပ​မာ​ဏ​ဟာ ကမ္ဘာပေါ်​မှာ​အချမ်း​သာ​ဆုံး​ပုဂ္ဂိုလ် မစ္စတာ​ဘေလ်​ဂိတ် ပိုင်ဆိုင်​မှု​ရဲ့ ( ၂ ) ဆ​ငွေ ဖြစ်​ပါ​တယ်။
ကမ္ဘာ့​ဘဏ်​ရဲ့ မ​ရှေး​မ​နှောင်း စာရင်း​အရ ဒီ ဒေါ်လာ ( ၁​၇​၈ ) ဘီ​လျံ ..!။ ဟုတ်​ပါ​တယ် .. ဒေါ်​လာ​သန်း​ပေါင်း ( ၁​၇​၈​ဝ⁠ဝ​ဝ ) ပါ..။ ဒီပ​မာ​ဏ​ဟာ န​ယူး​ဇီ​လန်​လို​နိုင်ငံ​ရဲ့ ပြည်​တွင်း​ကုန်​ထုတ်​မှု​ငွေ​ကြေး နဲ့ ပခုံးတိုက် ယှဉ်​လို့​ရ​ပါ​တယ်။ ဒီ့​အပြင် ဗီယက်နမ်၊ မို​ရော့​ကို၊ ဒီ​ကွေဒေါ် စ​တဲ့ နိုင်ငံ​တွေ​ရဲ့ GDP တွေ​ကို အသာ​လေး ကျော်​တက်​သွား​ပါ​ပြီ။
တကယ်​လို့ Apple သာ နိုင်ငံ​တစ်​ခု​ဖြစ်​ခဲ့​မယ်​ဆို​ရင် ကမ္ဘာပေါ်​မှာ ( ၅​၅ ) နိုင်ငံ​မြောက် အချမ်း​သာ​ဆုံး​တိုင်း​ပြည် စာရင်းဝင်​မှာ ဖြစ်​ပါ​တယ်။
ကိန်း​ဂဏန်း​တွေ​ကြောင့် စိတ်​မ​ရှုတ်​သွား​စေ​ချင်​ပါ​ဘူး။ ပန်း​သီး​မှာ ငွေ​ဘယ်လောက်​ရှိ​တယ်​ဆို​တာ သူ့​အမြတ်​ငွေ​က ပြော​ပြ​သွား​တာ​မို့​လို့ ခပ်​ဝေး​ဝေး ခန့်​မှန်း​စရာ​မ​လို​ပါ​ဘူး။ နိုင်ငံ​တစ်​ခု​ဟာ ချမ်းသာ​သ​ထက်​ချမ်းသာ​လာ​တယ် .. ပြီး​တော့ ငွေ​ကြေး​ဖောင်း​ပွ​မှု​နဲ့ အရွယ်​အစား​ပို​ကြီး​လာ​တယ်။ ပန်း​သီး​ရဲ့ ဓန​အင်​ပါ​ယာ​က ထို​နည်း​နှင်နှင်​ပါ။
ဒီ​နေရာ​မှာ​တော့ ( ၁​၉⁠၉​၉ ) တုန်း​က မိုက်​ခ​ရို​ဆော့ဖ် ရဲ့ သမိုင်း​ကို​တော့ မ​မှီ​သေး​ပါ​ဘူး။ မိုက်​ခ​ရို​ဆော့ဖ်​ဟာ အဲ​ဒီ​တုန်း​က ဒေါ်လာ ( ၆​၂​ဝ ) ဘီ​လျံ​ကြွယ်​ဝ​ခဲ့​ပါ​တယ်။ အခု​ခေတ်​ငွေ​နဲ့​ဆို​ရင် ( ၈​၇​ဝ ) ဘီ​လျံ​နဲ့ ညီမျှ​တာ​ပေါ့။ ဒီ​ငွေ​တွေ​ရဲ့ ဘယ်​အစိတ်​အပိုင်း​တွေ​က နည်း​ပညာ​ခေတ်​ရဲ့ အနာ​ဂါတ်​ကို ပြော​ပြ​နေ​ပါ​သလဲ? အခု​လက်​ရှိ ပန်း​သီး​ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်​မှု​ဟာ မိုက်​ခ​ရို​ဆော့ဖ် ရဲ့ ( ၃​၄​၉ ) ဘီ​လျံ​ထက် ( ၂ ) ဆ ကျော်​နေ​တာ ရိုး⁠ရိုး​ရှင်း⁠ရှင်း​လေး​ပါ။
တကယ်​တော့ ( ၁​၉⁠၉​၉ ) ခု​နှစ်​တုန်း​က Apple ဆို​တာ ခြောက်​တီး​ခြောက်ချက် ကာ​လာ​စုံ iMac ကွန်ပျူတာ နဲ့ အထက်​တန်း​ကျောင်း လက်တွေ့​ခန်း​တွေ​မှာ သုံး​နေရာ​က​နေ အဆင့်​မ​တက်​လာ​ပါ​ဘူး။
ပြန်​တွက်​ကြည့်​ရင် ယနေ့​နည်း​ပညာ​ကုမ္ပဏီ​တွေ​ဟာ ( ၁​၇​ဝ​ဝ ) နှစ်​များ​တုန်း​က ရေကြောင်း​စီးပွား​ရေး​ပြိုင်ဆိုင်​မှု​ကို အမှတ်ရ​စေ​ပါ​တယ်။ အဲ​ဒီ​တုန်း​က​ဆို အရှေ့​အိန္ဒိယ​ဒတ်ခ်ျ​ရေကြောင်း​ကုမ္ပဏီ​ဟာ ပြိုင်​ဖက်​အားလုံး​ကို ဈေး​ကွက်​ပြိုင်ဆိုင်​မှု​အရ ပင်လယ်​ထဲ အသီး​သီး နစ်​မြုပ်​စေ​ခဲ့​တယ်။
ဒီ​လောက်​မြင့်​နေ​တဲ့ ခန့်​မှန်း​ချက်​တွေ​ကို ဘယ်​လို​နားလည်​အောင် မှတ်သား​ရ​မ​လဲ? လွယ်⁠လွယ်​လေး​ပါ..။ ဒီ​နေ့​ခေတ် Apple ဟာ ( ၂​ဝ​၁​၅ ) စာရင်း​အရ ပိုင်ဆိုင်​မှု ဒေါ်လာ ( ၇ ) ထွစ်​လျံ ရှိ​နေ​ပါ​တယ်။ ဒါ​ဟာ ( ၇ ) နောက်​က သုံ​ည ( ၁​၂ ) လုံး ကပ်​လိုက်​တဲ့ ဒေါ်လာ​ငွေ ပိုက်ဆံ ပမာဏ ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ဒါ​မှ​မဟုတ် ပို​လွယ်​သွား​အောင် Apple ဟာ က​န​ဦး​က​ထက်​စာ​ရင် ( ၁​ဝ ) ဆ ပမာဏ​ကြီး​လာ​တယ်​လို့​သာ မှတ်​လိုက်​ကြ​ပါ​တော့။
Credit to ကို​ညီ​ညီ ( တောင်​ကြီး )
Next post ဖက်​တီး​မ ဘဝ​က​နေ သုံး​နှစ်​အတွင်း အလှ​မယ် ဖြစ်လာ​ခဲ့​တဲ့ အမျိုးသမီး
Previous post တို​ကျို
အသစ်​ထုတ်​လုပ် ရောင်းချ​မည့် စ​မတ်​ဖုန်း​တွင် Nokia ၏ အမည်​ကို ဖယ်ရှား​ရန် Microsoft ဆုံးဖြတ်
phyo, Oct 23, 2014
DSLR ကင်​မ​ရာ​တစ်​လုံး​မ​ဝယ်​ယူ​ခင်​မှာ ချင့်ချိန်​စဉ်းစား​စရာ အချက်​များ